Endri-javatra fitehirizana ovy, izay nojinjaina tamin'ny toe-javatra faran'izay mafy - magazine "Potato System"
Tena Trend / Trend Fandaminana fitehirizana
в Torohevitra momba ny manam-pahaizana manokana, Fandaminana fitehirizana
Ny iray amin'ireo antony lehibe miantraika mivantana amin'ny fiarovana ny voly ovy dia ny toetr'ireo ovy voatahiry. Ny tsara indrindra dia mioty ovy raha toa ka feno ireto fepetra manaraka ireto: hoditra matotra, rivotra mangatsiaka amin'ny alina (tsy ilaina miaraka amin'ny vata fampangatsiahana ao anaty fitehirizana), hamandoana amin'ny tany ampy mba hiantohana ny fijinjana tsy misy clod, ary ny mari-pana pulp amin'ny 15,5 ° C. Amin'ny tranga sasany, ny toetoetran'ny tany sy ny mari-pana amin'ny pulp dia mety ho tafahoatra ary noho izany dia ilaina ny fanitsiana fitehirizana sasany amin'ny dingana voalohany. Ireto misy toro lalana vitsivitsy momba ny fanitsiana ny fepetra faratampony.
Fanadiovana amin'ny toetrandro mangatsiaka (10 ka hatramin'ny 15 °C ) amin'ny toe-tany maina
1. Ny maripanan'ny tubers dia efa ao anatin'ny fetra takiana mandritra ny fotoana fitsaboana. Soso-kevitra ny hisafidy ny fomba fiasan'ny mpankafy ny elanelam-potoana mba hijanonan'ny mari-pana amin'ny fefy, ary homena oksizenina takiana mandritra ny fotoana fitsaboana.
2. Raha azo atao dia ampiasao ny rivotra ivelany, raha manakaiky ny mari-pana amin'ny pulp an'ny tubers ny mari-pana.
3. Raha avo kokoa noho ny mari-pana ny hafanan'ny rivotra ivelany mandritra ny antoandro, ahenao na ajanony ny fidiran'ny rivotra avy any ivelany ary ampiasao ny rivotra anatiny mba hitazonana ny mari-pana amin'ny fefy.
4. Ny ovy voatahiry ao anatin'ireto fepetra ireto dia maharitra 2 ka hatramin'ny 3 herinandro mandritra ny fotoana fitsaboana amin'ny hafanana 10 ka hatramin'ny 12 °C ary amin'ny hamandoana 95%.
Fanadiovana amin'ny toetr'andro mangatsiaka (10 ka hatramin'ny 15 ° C) amin'ny toetr'andro mando
1. Ny faritra mando amin'ny tubers dia tontolo iainana mety amin'ny fampandrosoana aretina ary manakana ny fifanakalozan'ny rivotra amin'ny tubers amin'ny alàlan'ny sistata. Raha manakaiky ilay fitsaboana ny mari-pana amin'ny pulp dia ilaina ny miantoka ny fandehanan'ny mpankafy tsy misy fampiasana «moisturif». Ho maina ny tampon'ny tubers. ...
2. Ny maripanan'ny rivotra famatsiana omena ny sisiny dia tokony ho ambany kely kokoa noho ny hafanan'ny pulp an'ny tubers (amin'ny 0,5 -1,0 ° C).
3. Raha vantany vao maina ny tubers dia ilaina ny miantoka ny fepetra amin'ny vanim-potoana fitsaboana: mari-pana 10-12 °C amin'ny hamandoana 95% mandritra ny 2 ka hatramin'ny 3 herinandro.
Fanadiovana amin'ny toetr'andro mangatsiaka (mari-pana 4,5 ka hatramin'ny 10 ° C) ary amin'ny toetry ny tany maina
1. Amin'ireto fepetra ireto, ny tubers ovy dia tena mora tohina amin'ny pulp - mila fijinjana malefaka kokoa izany.
2. Ilaina ny mampiakatra ny maripanan'ny tubers ho 10-12 °C. Izy io dia azo atao amin'ny alàlan'ny rivotra iainana, izay manangona ny hafanana ateraky ny fifohana rivotra..
3. Ny Humidifier dia tokony hiasa miaraka amin'ireo mpankafy famatsian-drivotra.
4. Raha tsy miova ny toetr'andro, dia ilaina ny manohy ny rivotra miditra amin'ny rivotra miaraka amin'ny hamandoana mandra-pahatapitry ny fitehirizana. Raha nihatsara ny toetr'andro sy ny fiakaran'ny maripanan'ny rivotra - ilaina ny manova ny toe-javatra arak'izany - asaina manokana ianao hijery ireo andiam-ovy napetraka farany
Fanadiovana amin'ny toetr'andro mangatsiaka sy amin'ny toetry ny tany mando (mari-pana ny 4,5 ka hatramin'ny 10 °C)
1. Ny fizotran'ny fanamaina ovy dia tsy maintsy atomboka avy hatrany amin'ny fametrahana ny tubers ao anaty fitehirizana; manohy mandra-pahatanteraky ny vokatra tadiavina; alao antoka fa ny hamandoana ao anaty antontam-bato (fitehirizana) dia tsy mitombo (amin'ny alàlan'ny fanamainana an-tery na ny famatsiana rivotra avo mando).
2. Raha mampihena ny fizotran'ny fanamainana ny toetr'andro mangatsiaka sy mando (mahatratra ny vokatra irina) dia azonao atao tsara ny mampitombo ny mari-pana ny rivotra omena ny antontam-baravarana amin'ny alàlan'ny fampiasana heaters.
3. Rehefa vita ny fizotran'ny fanamainana dia manome ny habetsahan'ny oksizenina ny rivotra miditra ary, miaraka amin'izay koa, manangona ny hafanana ateraky ny fisefoana ny fantsona hanafana ny fefy.
4. Raha vantany vao mahatratra 10-12 ny maripanan'ny tubers °C, afaka mandroso amin'ny vanim-potoana fitsaboana ianao, maharitra 2-3 herinandro amin'ny 95% amin'ny hamandoana.
Tags: pototra ny tahiry
Tonga tao Sakhalin avy amin'ny Kuriles ny andiany voalohany amin'ny ovy
Ny ovy roapolo taonina voalohany nambolena tao Iturup (Nosy Kuril) dia naterina tany Sakhalin. Ho an'ny Iturup, malaza amin'ny trondro sy caviar, saingy ...
Amin'ny vanim-potoana vaovao, ny faritra Tyumen dia mikasa ny hitazona ny faritra voafafy amin'ny haavon'ny taona lasa